Muimbi R Kelly Anowanikwa Aine Mhosva Dzose Dzaakapomerwa
Muimbi ane mukurumbira pasi pose, Robert Sylvester Kelly, uyo anozivikanwa nezita rekuti R Kelly, atarisana nekuvharirwa mujeri kwehupenyu hwake hwose.
Dare redzimhosva rakatonga R Kelly nezuro muBrooklyn, New York, rakamuwana aine mhosva dzose dzaakange achipomerwa, dzinosanganisira kuita zvepabonde nevasikana vasati vabva zera, kumanikidza vanhukadzi nevasikana vasati vabva zera kuita zvepabonde, kuronga nevamwe vake kutsvaka vanhukadzi nevanasikana vasati vabva zero kuti vaite zvechifambi uyewo kumanikidza vanhukadzi nevasikana vasati vabva zera kuti vagare naye pamba pake ivo vasingadi.
Kwemakore mazhinji, R Kelly akange ari muimbi ari pamusoro pevamwe vaimbi venziyo dze Rhythm & Blues.
Dzimwe nziyo dzakaitisa R Kelly mukurumbira dzinosanganisira "I Believe I Can Fly", "Bump N' Grind" nedzimwe zhinji uye akawana mibaiyiro yakawanda.
Kwemakore akawanda vaimbi vazhinji, varume nevakadzi nevadiki, vaiedza kuti R Kelly avabatsirewo kuti vabudirire mubasa rekuyimba.
Mumwe wevasikana vechidiki ava ainzi Aaliyah, uyo akaita mukurumbira akazofa mutsaona yendege.
Bepanhau reChicago Sun Times rinoti R Kelly, uyo akanga aine makore makumi maviri nemanomwe (27) nemwana musikana waakange achidzidzisa zvekuimba ainzi Aaliyah Dana Haughton, akange aine makore gumi nemashanu (15), vakachata muchivande muna 1994 mushure mekubudisa kwa R Kelly magwaro ainyepa zera raAaliyah.
Izvi zvinonzi apa R Kelly aiedza kuvharidzira mhosva yekupa nhumbu mwana akange asati abva zera.
Aaliyah akashaya mutsaona yendege kuBahamas muna 2001, aine makore makumi maviri nemaviri asi matare edzimhosva akanga agura muchato wake kuna R Kelly.
Kubva kumakore eku ma1990, pakange pane mitauro pamusoro pezvakanga zvichinzi zviri kuitwa naR Kelly kuvanhukadzi nevana vasati vabva zera.
Kunyangwe hazvo vanhu vaiziva zvakanga zvichiitwa naR Kelly, havana kutaura pachena kusvika muna Ndira 2019 apo pakabudiswa firimu, Surving R Kelly, raitaura pamusoro pevanasikana vasina kubva zera vakaitiswa zvepabonde uye vanhukadzi vakamanikidzwa kugara mumba maR Kelly vasingadi.
Dare redzimhosva rakatonga nyaya iyi razivisa kuti richapa mutongo waR Kelly musi wa4 Chivabvu gore rinouya.
Nyanzvi munezvehutano hwepfungwa, kana kuti Mental Health, Doctor Gadziro Gwekwerere, vanoti pane zvidzidzo zvizhinji zvatinowana pamuimbi R Kelly, vachiti munhu anotarisirwa zvepamusoro anogona kurasa chivimbo chevanhu vanovimba naye.
Vanoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti kuita mukurumbira kwemunhu hakurevi kuti munhu anenge akanaka.